माओवादीहरूको उदण्डतालार्इ धेरै नै राजनीतिकरण गरिएको मेरो ठम्मार्इले भने कताकता फेल खान थालेको जस्तो लागेको छ । आजभोली उनीहरूमा उदण्डता निकै बढ्न थालेको छ । नत्र किन उनीहरू कुनै पनि राजनैतिक संघ/संगठनको निर्बाध रूपमा कार्यक्रम चलाउन पाउने अधिकार माथि कोपभाजन गर्दैछन् ?
नेपाली राजनैतिक दलहरूबीचको समन्वयमा देखिएको कमजोरीको फार्इदा उठाउँदै भारतीय शासकहरूले फार्इदा उठाउन लागिरहेको कुरालार्इ कहिल्यै पनि बुझ्ने क्षमताको बिकास हुने भएन हाम्रा राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूमा । सधैं झगडा र लफडा गर्नमै दिन बित्ने भयो यिनीहरूको । किन गए माओवादीहरू कांग्रेस समर्थित ट्रेड युनियनको कार्यक्रममा ? किन उनीहरूले त्यो जंगली ब्यबहार प्रदर्शन गरे ? भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस